तरकारीको मूल्य दोब्बर बढ्यो, कुन तरकारीको कति वृद्धि ? « Deshko News
तरकारीको मूल्य दोब्बर बढ्यो, कुन तरकारीको कति वृद्धि ?
चाडपर्वसँगै विराटनगर बजारमा तरकारीको मूल्यमा दोब्बर वृद्धि भएको छ । विराटनगर बजारमा खपत हुने अधिकांश तरकारी मोरङको पूर्वी र दक्षिणी क्षेत्रका साथै सुनसरीको देवानगञ्जबाट आउने गर्दछ तर उक्त क्षेत्रमा भदौ महिनामा आएको बाढीले खेती डुबानमा परेपछि तरकारीको उत्पादनमा कमी भई यसको मूल्यमा वृद्धि भएको हो ।
बाढी आउनुअघि प्रतिकिलो २५ पर्ने प्याज अहिले ५० छ भने ३० पर्ने आलु ६० पुगेको छ । यस्तै ४० प्रतिकिलो पर्ने गोलभेँडा ६० देखि ७०, ५० प्रतिकिलो पर्ने रामतोरिया अहिले ८०, प्रतिकिलो २५ पर्ने घिरौंला ४० देखि ५० तथा ३० प्रतिकिलो पाइने काँक्राको मूल्य अहिले रु ६० पुगेको छ ।
यस्तै प्रतिकिलो २५ पर्ने प्याज अहिले ५० मा पुगेको छ भने ७० पर्ने फूलकोभी अहिले १२५ मा सर्वसाधाराणले खरिद गरिरहेका छन् ।